Khabar Kantipur » दुखद खबर सबैलाई सुरक्षित रहन भन्दै डाक्टरले गरे आ.त्म ह,त्या…….
दुखद खबर सबैलाई सुरक्षित रहन भन्दै डाक्टरले गरे आ.त्म ह,त्या…….
भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा एक जना डाक्टरले आ, x त्म, x ह, x त्या गरेका छन्।
दिल्लीको साकेतस्थित म्याक्स अस्पतालको कोरोना वार्डमा खटिएका ३५ वर्षीय डाक्टर विवेक रायले आ, x त्म, x ह, x त्या गरेका हुन्। कोरोना भाइरस महामारीको दोस्रो लहर सुरु भएपछि विवेक निकै त, ना, वमा रहेको भारतीय सञ्चारमाध्यमले उल्लेख गरेका छन्।